Arday baahiyaha gaarka qaba oo loo kafaala qaaday qarashaadka jaamacadda – AfmoNews
Arday baahiyaha gaarka qaba oo loo kafaala qaaday qarashaadka jaamacadda
Illaa 10 arday oo araga naafa ka ah oo u badan gabdho ayaa Hay’adda Hormuud Salaam Foundation oo kaashaneysa jaamacadaha dalka waxa ay ka kafaala qaaday in ay ka caawiso waxbarashadooda heerka jaamacadeed, kuwaas oo dhameystay Dugsiga Sare.
Masuuliyiinta Hay’adda Hormuud Salaam Foundation ayaa ballanqaaday in dhinac weliba oo la xiriira baahiyaha ardaydan araga naafada ka ah ay ka taageeri doonaan, si ay ula jaan qaadaan asaagooda wax-ka-barta jaamacadaha dalka. Dugsiga inshoolayaasha ee Al-nuur oo ay ku soo qaateen waxbarashada hoose iyo dhexe ayaa u fududeeyay ardaydan u badan gabdhaha in ay dhameystaan Dugsiga Sare, una gudbaan heerka 1aad ee jaamacadda.
Cabdifitaax Maxamed Daahir, Maamulaha Dugsiga indhoolayaasha ee Al-nuur oo ka hadlayay barnaamij lagu dhiirigelinayay ardaydan araga la’ ee taagan heerka jaamacadeed ayaa uga mahadceliyay Hormuud Salaam Foundation kaalinta ay ka gaysaneyso caawinta dadka aan lixaadkooda dhameystirneyn, sida ardaydan araga naafada ka ah, isagoo sidoo kale u mahadceliyay jaamacadaha iyaguna gacnta ka gaystay wax barista ardayda gabdhaha u badan.
Gudoomiyaha Hay’adda Hormuud Salaam Foundation, Cabdullaahi Nuur Cismaan ayaa hadalo u badan dhiirigelin u jeediyay ardaydan, isagoo dhanka kalana sheegay in markasta ay taageeradooda la garab taagan yihiin.
Qaar kamid ah ardayda araga la’ ee Hormuud kafaala qaaday waxbarashadooda ayaa si farxadi ay ku dheehan tahay u soo dhaweeyay deeqdaasi, iyagoona boggaadiyay sida ay aalaaba u garab joogto dadka, kuwooda taageerada u baahan.
Walidiintii dhalay ardaydan ayaa qaarkood waxay Hormuud Salaam Foundation iyo Dugsiga Al-nuur ku ammaanayn, kuwo soo noolleeyay rajadii mustaqbalka ee ubadkooda.
Dugsiga Indhoolayaasha Al-Nuur oo si dhow u uga shaqeeya waxbarashada aasaasiga ee ardayda baahiyaha gaarka qaba ayaa xaruntiisa ugu weyn waxay ku taallaa deegaanka Daaru Salaam. Dugsiga ayaa ka kooban qaybo isugu jira wiilasha, hablaha, qaybta jiifka iyo masaajid, oo horaan ay dhistay Shirkadda Igaarsiinta ee Hormuud Telecom.